Deltarune Chitsauko 2: Mawaniro ezvakavanzika boss | la-manette.com
Deltarune Chitsauko 2: Mawaniro ezvakavanzika boss
6 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Sezvakangoita muChitsauko 2, vatambi vanogona kuwana zvakaoma chakavanzika boss muChitsauko XNUMX che Deltarune kana vakagadzirira kutora matanho anodiwa.
Chitsauko chechipiri cheDeltarune chave kuwanikwa mahara. Zvinotora nyaya yacho zvakananga kubva kumagumo echitsauko chekutanga. Kufanana nechitsauko chekutanga, ichi chikamu chitsva chizere nezvakavanzika zvakamirira kuwanikwa uye chinonongedza pane chakavanzika chakakura.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvechitsauko chekutanga cheDeltarune chakabata pfungwa dzevatambi ndiye akavanzika mukuru, Jevil. Kunyange isingawanikwe kuChitsauko 2, pane mumwe mukuru wepachivande uyo vatambi vanogona kutarisana nawo kana vakatevera matanho akakodzera. Nekudaro, uyu mukuru wepachivande ndiro dambudziko rinotyisa rechitsauko, iro rinogona kukonzera kutarisisa kwakawanda.
RELATIVE: Sims 4 Cheats, Cheat Codes & Walkthroughs For Your PC
Vatambi vanogona kupedzisa matanho anodiwa kuti vasvike kune chakavanzika boss chero vari muRima Nyika iri muraibhurari komputa lab. Nekuda kwehunhu hwemukuru uyu, vaparadzi vadiki vachakurukurwa, sezvo izvo zvinodikanwa zviri chikamu chekufambira mberi kwenyaya yeChitsauko Chechipiri.
Chikwekwe chekutanga chebhuruu
Nhanho yekutanga yekuvhura sahwira wepachivande inogona kuitwa munzvimbo yekutanga yeChitsauko 2: Cyber ​​​​Field. Kutanga kubva pamharadzano dzenzira uko musuwo weguta reDeltarune uripo, vatambi vachafanira kuenda kumabvazuva. Panzvimbo pekunanga munzvimbo yekunzvenga bullet pane inotevera mepu skrini, vatambi vachada kuenda kuchamhembe kune imwe nzvimbo yemepu.
Mune iyi mepu yekuchamhembe pane mbeva-yakafanana hunhu inozivikanwa seHacker. Ichakumbira mutambi kuti awane matatu ebhuruu cheki mamaki ari muCyber ​​​​Field. Nekuita izvi, anozobatsira mutambi gare gare muchitsauko maererano nemukuru wepachivande.
Mucherechedzo wekutanga webhuruu unogona kuwanikwa nekusiya nzvimbo yepirate, uchienda kumabvazuva uchipfuura nechikamu chekutanga chebhururu, asi uchienda kumaodzanyemba pane kupfuura nechikamu chechipiri chekutsausa bullet. Izvi zvinotungamira vatambi kunzvimbo uko kune akawanda maTasque akagadzirira kurwa. Kutora yekubuda nechepazasi kumabvazuva kwechidzitiro, vatambi vanowana chipfuva chine wrist inopenya uye yekutanga yebhuruu cheki chiratidzo.
Wechipiri murairidzi webhuruu
Murairidzi wechipiri ari munzvimbo ine matatu akasiyana teacup anokwira. Kana imwe yadzo ichitungamira uko vatambi vanofanirwa kufambira mberi, imwe inotungamira kune yechipiri bhuruu cheki chiratidzo.
Verenga zvakare: Sims 4 Cheats, Cheat Codes & Walkthroughs For Your PC
Pakati pemakapu matatu etii, iyo iri pakati ichatungamira vatambi kune murairidzi. Kuti uiwane, vatambi vanofanirwa kutenderedza merry-go-round kuitira kuti Kris asangane nemiseve apo boka rinokwira. Susie kana Ralsei kurova miseve hakuverengeki, uye merry-go-round ichadzokera pasi kana vatambi vakapotsa chero miseve. Pamusoro pane chipfuva chine cheki chechipiri.
Chikwekwe chechitatu chebhuruu
Cheki chekupedzisira cheblue chinogona kuwanikwa nekukwira kuruboshwe teacup merry-go-round nekurova miseve yese naKris, yakafanana neyepakati teacup merry-go-round. Panzvimbo pechipfuva, izvi zvinotungamirira vatambi kune a dambanemazwi kwavanofanira kunyora "GIASFELFEBREHBER". Mutsara uyu hauna chirevo chiri pachena uye unoratidzika kunge keymash.
Nepo hunhu husina musoro hwezwi rekuti "makiyi akapwanyika" hunogona kuita kuti pikicha itye, inogadziriswa zviri nyore kana vatambi vakatora nguva yavo. Vara rinotevera rekupinda kwega kwega rinowanzo kuwanikwa padivi pekiyi mutambi akamira paari, uye vatambi vanokwanisawo kubuda mukiibhodhi kuti vasvike imwe tsamba. Nekunyora chirevo, vatambi vanowana cheki yavo yekupedzisira yeblue.
Mushure mekuwana ese mabhokisi ebhuruu, vatambi vanongofanira kudzokera kupirate, uko zvinoita sekunge mubairo wega weichi chidimbu chekutsvaga ndeye fireworks. Izvi zviri kure nemubairo wega, sezvo pirate inodzoka gare gare muchitsauko.
Tsvaga iyo yakavanzika ndima mukamuri yepasi
Kana vatambi vakapedza Pirate Side Kutsvaga, anozoonekwa munzvimbo mbiri dzakasiyana muQueen's Mansion. Mushure mekusangana nemaneja weLa Tasque, kamuri rinotevera muimba huru richava nemasitepisi uye mugwagwa une mota dziri kuuya. Masitepisi anotungamira kufambira mberi kwenyaya uye anogona kusvetuka izvozvi, saka vatambi vachada kushandisa akasiyana mabhatani ekumisa kuomesa traffic kwenguva pfupi kuti vadzivise kugogodzwa.
Mushure mekupfuura nemota dzese, vatambi vanozokwanisa kusvika pakubuda kwekumabvazuva kwekamuri. Pakusvika pakubuda uku, traffic mukamuri ichamiswa zvachose, saka vatambi havachada kuita yekumisa bhatani puzzle pese pavanenge vachida kuyambuka mukamuri kubva panguva ino zvichienda mberi.
Imba yekumabvazuva izere nemifananidzo yakasiyana-siyana yamambokadzi, matafura, mapaneru, uye zvigadziko zvemwenje. Kana iyo yedivi kuda kubva pakutanga yapedzwa, pirate inofanirawo kuwanikwa ichitenderera mukamuri. Kutaura naye, iwe uchadzidza kuti anoziva ndima yakavanzika pane imwe nzvimbo muimba.
Verenga zvakare: Nzira yekuchenesa MacBook yako yakasviba
Kuti vamuwane, vatambi vanofanira kumutarisa achimhanya-mhanya mukamuri uye votarisa shanduko yemuviri wake, inoenda kubva kune yakajairwa mbeva cursor kuenda kune inodzvanya mbeva cursor. Nzvimbo yainochinja ndipo pane bhatani rinovhura ndima yakavanzika mukamuri yepasi. Tinya pairi kuti uvhure zvese uye nzira yekudimbudzira kunzvimbo huru yeimba huru.
RELATIVE: Yemahara PS Plus mitambo yaNovember 2021 inosanganisira 6 mazita, asi hapana mikuru mitambo
Kiinura imba yepasi
Kana musuwo wepasi wave kuwanikwa, imba yepasi pachayo ichiri kukiyiwa. Kuti uwane iyo, vatambi vanofanirwa kuwana chinhu chinozivikanwa seGen-Key. Ichi chinhu chinogona kutengwa kubva muchitoro chakavanzika chinotungamirwa nemini-boss anonzi Spamton, pakutanga muchitsauko.
Kuti uwane chitoro cheSpamton, vatambi vanofanirwa kupinda nepamusuwo wewarp muimba huru vakananga kunzvimbo yemarara. Kuenda kuruboshwe rwemusuwo mune inotevera mepu uye kuenda kuchamhembe kuburikidza neburi riri pamadziro, vatambi vachauya kuchitoro icho Kris chete anogona kupinda. Iyi ichitoro cheSpamton, inzvimbo izere nemagwaro uye zvinhu zvinoshoreka. Chimwe chezvinhu zvinotengeswa naSpamton ndiyo Key-Gen. Kunyangwe ichidhura, mutengo wayo uri kuramba uchichinja, saka vatambi vanofanira kuramba vachiedza kuitenga kusvika yasvika pamutengo wavanokwanisa kutenga.
Mushure mekuwana Key-Gen, achitaura naSpamton, mutengesi anokumbira Kris kuti atore dhisiki kubva kumashure kwepasi uye adzose kwaari. Nechinhu chichangobva kutengwa chiri muruoko, vatambi vanogona kutora danho rinotevera.
Kuenda kuimba yepasi, Kris haatendere Susie kana Ralsei kuvatevera. Munda wekumanikidza uri kuvhara nzira yekumabvazuva, saka vatambi vanofanirwa kutora nzira yekumadokero. Pachave nenjodzi dzinogona kutora kuruma kunze kwehutano hwaKris kana vatambi vakasanzvenga nekungwarira zvakakwana. Nepo Kris asingazofanira kurwa ari ega muchikamu chino, vatambi vachada kuchengetedza hutano hwaKris zvakanyanya sezvinobvira pakati pekuchengetedza.
Mukamuri yekuruboshwe-yakawanda mukoridho ndiyo inoratidzika kunge isina chinhu pakutanga. Nekudaro, teacup merry-go-round ichaonekwa uye inotora Kris yakadzika kwazvo mukamuri umo switch iripo kudzima simba remumunda. Apa ndipo panotangira dambudziko.
Verenga zvakare: Maitiro ekutamba Call Of Duty Mobile ine PS4 kana Xbox controller
Kana Kris asvika pa teacup elevator, matani ebhora anotenderera anooneka pakudzoka. Kana iwe ukabatwa usina kungwarira zviri nyore kwazvo kuti vatambi varasikirwe nehutano hweKris. Iyo yakanakisa nzira yekunzvenga ndeyekutevera gwara remabhora anotenderera. Izvi zvinogona kutora akati wandei, nekudaro kukosha kwekuchengetedza mushure uye kudzoreredza hutano hwaKris.
Iyo ichangobva kuvhurwa nzira inotungamira vatambi mukamuri ine njanji uye makamuri maviri. Pakupinda mukamuri yekumabvazuva, vatambi vanowana asina chinhu uye akakura tunnels pamwe nerobhoti rakashata. Murobhoti iri ndiro dhisiki raidiwa naSpamton.
Svika kune secret boss
Mushure mekuunganidza dhisiki yekare, vatambi vanofanira kudzokera kunzvimbo yemarara uye kutaura naSpamton kuti vamupe disc. Nekubvuma kumupa dhisiki, vatambi vachayeverwa kuti izvi zvichavhara chitoro chake uye kuita kuti isasvikiki zvachose. Nechikonzero ichi, vatambi vanofanirwa kutenga zvavanoda vasati vamupa.
Mushure mekunge dhisiki yaendeswa, Spamton achakumbira Kris kuti aise dhisiki murobhoti iyo vatambi vakaiwana mairi. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kudzokera kune mansion basement uye robhoti. Iko nekudzosera disc murobhoti iyo musangano wepachivande nemukuru webasa uchatanga. Vatambi saka vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti vakachengeta zvinhu nemidziyo uye kuti vakaponeswa nemazvo kurwa kusati kwatanga. Hondo yacho yakaoma uye vatambi vanofanirwa kuigadzirira.
Deltarune: Zvitsauko 1 uye 2 zviripo izvozvi PC kuburikidza ne itch.io uye Steam.
Kubata Hove muImpact Genshin: Hove Respawn Nguva Yekutungamira